Cilmi baadhida – Littsint
Cadhada iyo dagaalka gudaha qoyska
Cilmi baadhida dhow waxay muujisaa inaan u baahanahay inaan eegno ka hortagga cadhada iyo dagaalka dhanka carruurta gudaha Norway ee ka timid aragtida caafimaadka dad waynaha. Daraasada Mossige (2016) waxay muujinaysaa 6% dadka da’da yar inay su’aaleen inuu helay daawaynta caafimaadka iyaddoo ay natiijadu tahay dagaalka waalidka (la feedhay, la garaacay). Hooyooyinka aabbayaasha waxay muujiyeen dagaal darran dhanka carruurtooda ah qiyaas la mid ah. Mossige indheeraad ah waxay muujinaysaa in 21% dadka dhalinta yar ay ka warbixiyeen inay la kulmeen dagaal ka darnaansho yar oo ay ka baqdeen cadhada waalidkooda (dhirbaaxid, luxid dagaal ah, qanjiidhin, iwm) – 14% hooyooyinkooda iyo 13% aabayaashood. Daraasanda waxay muujisaa inaanu jirin faraq u dhexeeya qadarka labba ka degen iyo dagaalka darran ee ay isticmaalaan hooyooyinka iyo aabbayaasha, iyagoo ka dhigaya maaraynta cadhada mid khusaysa labbada waalidba.
Daraasada ACE (Filetti 2009) waxay raacday 17,000 oo carruur ah muddo 15 sano ah, oo waxay heshay in ku noolaanshaha baqdinta iyo dagaalka ka timaada waalidka muddo dheer ay tahay duruufta ugu waxyeelada badan taas oo ilmaha la gaadhsiin karo. Ku noolaanshaha xaalad diyaar ah waxay daciifisaa nidaamka difaaca jidhka oo waxya kordhisaa khatarta tirada ee labbadaba cabashooyinka jidhka iyo kuwa maskaxeed.
Ururka Caafimaadka Norway (NMA 2010) waxa uu sameeyay warbixin ku salaysan cilmi baadhida ay ku jirto daraasada ACE. NMA waxa uu qoray “natiijooyinka ACE bandhiga daraasada saamaysa khibradaha xun ee carruurnimada inay qoto dheertahay, ay korodho muddo ka dib, oo ay ka ciyaarto door go’aan qaadasha leh dhibaatooyinka caafimaadka ee ka dambeeya iyo dhimasho hore u dhacda.Cabashooyin badan oo guud oo qaan gaadhimada ah waa loo fasiraa inay keentay duruufaha carruurnimada. Tallaabooyinka ka hortagga iyo daawaynta lama huraanka ah waa in loo bixiyaa si waafaqsan”.
Curiskeeda digtooraaga “ sababtee carruurta la dhaawacaa u noqdaan dad waa wayn oo buka”, Kirkengen waxa uu muujiyaa in xataa dagaalka degen ee qaabka cadhada ah uu waxyeelo u yeelan karo carruurta. Sababta muhiimka ahwaa haddii cadhada loo qaato sidii kuwa aan la saadaalin karin, oo sidaasna waxay ku abuurtaa xaaladda aan sugnayn ilmaha muddo ka dib (Kirkengen 2008).
Dib u eegida kiisaska laga qabtay Xarunta Latalinta Qoyska ee Qaabka waxay muujisay 85% waalidku qaba dhibaatooyinka cadhadu ay dooneen in la siiyo nooca daawayn ah. Tirooyin la mid ah oo hooyooyinka iyo aabbayaasha waxay dooneen caawimo. 15% hadhay waxay ku dhaleeceeyeen cadhadooda kuwa kale oo may doonayn inay soo xaadiraan kullanka.
Daraasadaha eegaya xaamaynta daawaynta garaadka ee maaraynta cadhada waxay muujiyaan 3 ka baxsan 4 dad ah inay hagaajiyeen cadhadoodii si ka wanaagsan ka dib daawaynta (Beck iyo Fernandez 1998).
Ujeedada websaydka littsint.no, e-book iyo abka maaraynta cadhada waa in la gaadho aqoonta cilmi nafsiga iyo qaabka awood u siiya waalidka nafahooda inay abuuraan mid aad u amni badan iyo nolol maalinle ah oo la saadaalin kafro oo carruurtooda ah. Waxaa jira sidoo kale macluumaadka halka laga raadinayo caawimada xirfada leh haddii loo baahdo.
khabiirka cilmi nafsiga iyo daaweeyaha garaadka.